DriveTribe, oo ah shabakad bulsheed loogu talagalay baabuurta jecel | Wararka IPhone
Ficil ahaan maalin kasta qaar ka mid ah shabakadaha bulshada ayaa ku dhasha adduunka, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in aqlabiyad badan ay ku dhacdo hilmaam dhowr bilood ka dib, xaaladaha ugu fiican. Marka la eego DriveTribe waxaan doonayay inaan dulqaato oo aan siiyo dhowr bilood ka hor intaanan kaaga sheegin, laakiin hadda waxaan u maleynayaa inay tahay waqtigii aan tan horteeda ka keeni lahaa. shabakad bulsheed oo qumman kuwa naga mid ah kuwa jecel adduunka mootada, iyo gaar ahaan baabuurta. Dabcan, oo horeyba waan kaaga digayaa, gebi ahaanba af Ingiriis.
Maalmahan aad ayey u fududahay inaad mashruuc hormariso haddii aad haysato taageero dadweyne oo kugu filan, kiiska DriveTribe ayaa si gaar ah tusaale ugu ah tan. Calamaday saxafiga mootada ugu caansan adduunka (Jeremy Clarkson) oo ay taageerayaan labadiisa asxaab ee aaminka ah (James May iyo Richard Hammond), DriveTribe waxay laheyd dhiirigelin lagama maarmaan ah inay dhex gasho qoto dheer bulshada aan ka labalabeynin inay aadaan halka Jezza u socoto, iyagoo cadeyn fiican u ah Tani waa saameynta cajiibka ah ee 'Grand Tour' iyo guuldarada macquulka ah ee 'Top Gear' cusub.
Laakiin waxa heck waa DriveTribe? Waxay ku qeexaan inay yihiin "shabakada bulshada ee loogu talagalay dadka jecel tartanka mootooyinka", waana weli qeexitaankeeda saxda ah, laakiin waxay mudan tahay inaan tagno wax yar sii dheer. Waxay ka kooban tahay 'qabiilooyin' kala duwan oo aan wax ka qori karno oo aan ku daabici karno, had iyo jeer sida ay u kala jecel yihiin. Waxaa jira gawaari caadi ah, supercars ama wadooyin aan caadi aheyn, si aad u bixiso seddex tusaale oo fudud.
Maanta ma guuleysan kartid haddii aadan si sax ah u codsan, waana dhihi karnaa taas DriveTribe ayaa leh. Iyada oo nashqad ay madow iyo caddaan u badan yihiin, abku wuxuu ku shaqeeyaa xawaare aad u fiican wuxuuna fududeeyaa maareynta shabakadda bulshada xitaa in ka badan websaydhka laftiisa kumbuyuutarka.
Waxaan si gaar ah u jeclahay qaybaha liiska hoose, maadaama ay noo ogolaadeen inaan aragno waxa aan dooneyno. Waxay na siinaysaa qayb akhris-keliya ah, qayb fiidiyoow ah, maareynta 'qabiilooyinka' iyo diiwaanka digniinta la helay. Waa nidaam ka dhakhso badan shabakadaha kale waxayna keydineysaa waqtiga raadinta waxyaabaha aan dooneyno inaan cunno. Dabcan, waxaan ku darsan karnaa qabiilooyinka waxyaabaha aan ka kooban nahay, maadaama ay tahay fikradda aasaasiga ah ee isku xirnaanta bulshada.
Sidaas darteed way iska cadahay inaanu wajaheyno jawi aad u qaas ah oo aanan boos u heynin dadka aan jecleyn matoorka, laakiin 'baatrooliyada' hadda waxay leeyihiin meel ay ahaadaan wargalin iyo madadaalo, intii uu la talin jiray jaceylka iyo necbaanta Jeremy Clarkson. Adiguna, waad hagaajin kartaa Ingiriisigaaga, sax?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » DriveTribe, waa shabakad bulsheed loogu talagalay baabuurta jecel
Barnaamijyada 32-bit kuma shaqeyn doonaan iOS 11
IOS 11 Qalabka La-jaanqaadi karo